Isticmaalka Qaybaha Qani ah ee Bogagga Alaabta Ecommerce | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Isticmaalka Qaybaha Qani ah ee Bogagga Alaabta Ecommerce
Isticmaalka Qaybaha Qani ah ee Bogagga Alaabta Ecommerce
Qaybo qani ah waa tafaasiil dheeraad ah oo ku jira liisaska dabiiciga ah ee ka muuqda natiijooyinka raadinta. Qiimaynta, qiimayaasha, FAQ-yada, fiidyaha - dhamaantood waa tusaalayaal qaybo qani ah.
"Sructured markup" waa code barnaamij oo abuura qaybo qani ah. Mareeg kasta waxa ku jiri kara calaamadayn habaysan - Schema.org waa nooca ugu caansan. Sidaa darteed qaybo qani ah ayaa gabi ahaantood hoos yimaada goobta.
Qaybo qani ah ayaa ka muuqda miisaska iyo natiijooyinka raadinta moobaylka, laakiin inta badan aad ayay u saameeyaan moobaylka.
Qaybo qani ah oo loogu talagalay boggaga alaabta
Waxaa jira Schema.org badan oo ah “ereyo-bixinno,” laakiin wax yar oo keliya ayaa saameeya muuqaalka liiska raadinta dabiiciga ah. Xitaa in ka yar ayaa lagu dabaqaa bogga alaabta ecommerce. Waxay kala yihiin:
Product schema ka kooban yahay qiimaha shayga, qiimaynta xiddiga, iyo helitaanka.
FAQ schema waa liis su'aalo iyo jawaabo caadi ah.
Sida loo schema waa tilmaamo tallaabo-tallaabo ah.
Video schema waxay muujinaysaa thumbnail muuqaal ah.
Hirgelinta mid ka mid ah kuwan waxay ku xiran tahay inta badan nidaamka maareynta macluumaadkaaga. Inta badan CMS-yada iyo goobaha ecommerce-ka ayaa fududeeya isticmaalka xogta qani ah. WordPress iyo WooCommerce waxay leeyihiin plugins. Shopify waxay leedahay schemas gaar ah.
Ganacsatada aan lahayn khibrad barnaamijeed waa in aanay isku dayin in ay calaamadeeyaan calaamadaynta qaninimada. Taa beddelkeeda, la shaqee aaladahaaga iyo isku-dhafka.
Kala hormarinta Qaybaha Qanisan
Halkan waxaa ah qayb ka mid ah kala-mudnaansiinta bogga alaabta.
Product qaybo qani ah ayaa ka mid ahaa kuwii ugu horeeyay ee Google taageeray. Waa tan ugu caansan, iyo midda Google-ka ay si gaar ah isha ugu hayso. Xeerarka ugu muhiimsan waa (i) u isticmaal bogga wax soo saarka dhabta ah, ma aha qaybaha, iyo (ii) muujinta qiimaynta xiddigaha kaliya dib u eegista aad ururisay. Qiimaynta xiddiguhu waa qaybta ugu fiican ee qorshayaasha alaabta. Waxay u dhigmaan ujeeddada ganacsiga si qumman waxayna soo jiitaan dhagsi badan.
Qaybo ka mid ah alaabooyinka qani ku ah waxay ku habboon yihiin ujeeddada ganacsiga. Tusaalahani waxa uu ka kooban yahay qiimaynta xiddigaha, qiimaha (“$49.95”), iyo helitaan (“In stock”).
FAQ qaybo qani ah ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan haddii laba ama in ka badan su'aalo laga jawaabo bogga alaabta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaasho labada badeecada iyo qorshaha FAQ, Google caadi ahaan wuxuu muujin doonaa kaliya qorshaha alaabta. Waayo-aragnimadayda, qaybo FAQ ah ayaa caadi ahaan ah kuwa ugu badan ee la gujiyo. Laakin waan ku dhejin lahaa qaybo ka mid ah alaabta sababta oo ah ujeedka la iibsan karo. Isticmaal FAQ-yada haddi schema alaabta aan la heli karin.
Qaybaha FAQ qani ku ah inta badan waa kuwa ugu badan ee la gujiyo, laakiin caadi ahaan kama soo muuqdaan qorshayaasha alaabta.
Sida loo jajabyo qani ah maaha kuwa ugu fiican boggaga alaabada sababtoo ah had iyo jeer kama tarjumayaan ujeedada ganacsiga. Laakin sida loo sameeyo schemas waxay ka caawin kartaa boggaga alaabada inay u qiimeeyaan weydiimaha macluumaadka. Ma aanan arag sida loo sameeyo iyo qaybo alaabta oo la isku daray hal liis. Markaa ha ku mashquulin sida loo qorsheeyo haddii qiimaynta iyo faallooyinka la calaamadeeyay.
Sida loo helo qaybo hodan ah ayaa kaa caawin kara darajada bogga wax soo saarka ee weydiimaha macluumaadka, laakiin caadi ahaan kama tarjumayaan ujeeddada ganacsi.
Video Qaybo qani ah ayaa kordhiya ka-qaybgalka bogga ka raadiyaha riixaya iyo daawashada. Haddii aad fiidiyowyo ku hayso boggaga alaabta, tixgeli inaad isticmaasho qaabkan. Intaa waxaa dheer, waxay si fiican isugu darsataa schema alaabta - waxaa laga yaabaa inaad labadaba ku heli karto liis dabiici ah oo keliya.
Qaybo qani ah oo fiidiyoow ah ayaa si wacan isugu daraa naqshada alaabta.
Kor u qaadida gaadiidka
Calaamadaynta xogta habaysan sida Schema.org waxay si wayn u wanaajin kartaa liisaska goobista dabiiciga ah. Hirgelinta calaamadaynta qani waa bilaash waxayna si joogto ah u kordhin kartaa raadintaada.
Calaamadaha Kalsoonida 101: Sida Loo Dhiso Kalsoonida loona Kordhiyo Beddelka Ecommerce
Sida loo beddelo kaarka deynta ama akoonka bangiga ee uu isticmaalo barnaamijka cusboonaysiinta iPhone